“Waan ku dabaal degi doonaa hortooda haddii aan gool ka dhaliyo Barcelona” – Luis Suarez – Gool FM
(Madrid) 10 Okt 2020. Weeraryahanka reer Uruguay ee Luis Suarez ayaa dhaleeceeyay maamulka kooxdiisii ​​hore ee Barcelona, isagoo carabka ku adkeeyay inuusan dabaaldegi doonin haddii uu gool ka dhaliyo naadiga reer Catalonia, laakiin uu ku hor sameyn doono kuwa uu u arko inay mas’uul ka yihiin bixitaankiisa.
Kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ee ka dhisan caasimadda Spain ayaa la saxiixatay Luis Suarez, kaasoo ay kala soo wareegeen naadiga Barcelona, inta lagu gudi jiray suuqii xagaaga ee dhawaan la soo xiray.
Haddaba Luis Suarez ayaa wareysi uu ku bixiyay shabakada “ESPN” wuxuu ku sheegay:
“Waxaan joogay Barcelona 6 sano, waligeyna wax dhibaato ah kalamaan kulmin, waxaan sheegay saddex sano ka hor Barcelona waxay ubaahantahay weeraryahan dhalinyaro ah si uu ulaqabsato waqtiga, laakiin ma aysan keenin qof ila tartami kara, xilli kasta waxaan ku jiray heerka ay u baahan tahay kooxda”.
“Waxaan u qalmay xushmad aan ku helay waxqabadkeyga garoonka anigoo ka ogaaday saxaafadda warka ku saabsan bixitaankeyga, waxay aheyd in tababaruhu uu ii yimaado uu ii sheego inuusn igu tiirsanaan doonin, kaddib markii uu maamulka sheegay inay jiri doonaan isbedel ku aadan safka kooxda, tani waxay kaa dhigeysaa inaad is weydiiso in go’aanka uu yahay mid ku xiran tababaraha Mise maamulka?”.
Si kastaba ha noqotee, Luis Suarez ayaa carabka ku adkeeyay inuusan ku fekerin “haba yaraatee” inuu u dhaqaaqo safka kooxda ay xafiiltamaan ee Real Madrid, wuxuuna isla markaas si cad u sheegay xiriirk weyn ee kala dhexeeya kabtanka naadiga Barcelona ee Lionel Messi.
Wakiilka Lautaro Martinez oo ka hadlayaa mustaqbalkiisa... iyo riyadiisa ah inuu la ciyaaro Messi